I-COVID-19: Ukubukwa Okusha Kwamasu Ohlelo Lokuthembeka Kwamabhizinisi | Martech Zone
ICoronavirus inyuse umhlaba webhizinisi futhi iphoqa wonke amabhizinisi ukuthi alibheke kabusha igama ukwethembeka.
Cabanga ngokwethembeka ngokombono wesisebenzi. Amabhizinisi adiliza abasebenzi kwesobunxele nangakwesokudla. Izinga lokungasebenzi lingadlula I-32% ngenxa yeCoronavirus Factor futhi ukusebenza ekhaya akuhambisani nayo yonke imboni noma isikhundla. Ukudilizwa kwabasebenzi kuyisixazululo senkinga yezomnotho… kepha akubenzi abantu bathandeke.
I-COVID-19 izoba nomthelela imisebenzi engaphezu kwezigidi eziyi-25 futhi umnotho womhlaba wonke uzohlupheka noma yikuphi phakathi kuka- $ 1 trillion kanye no- $ 2 trillion.
I-International Labour Organization
Amabhizinisi asebenza ngokungalawuleki ngenxa yokuma okunselele abhekene nesinqumo esinzima sokuthi ngabe bayabashiya yini abasebenzi noma bayabagcina emholweni owehlisiwe noma basebenzise amanye amasu okuthembeka. Kungaba lula ukudedela abasebenzi bahambe… kepha ungalindeli ukuthi abasebenzi abakhulu bazobuya uma ibhizinisi lakho libuyela empilweni.
I-CNBC ihlola lokho Amabhizinisi ayizigidi eziyi-5 umhlaba wonke uthintekile ubhadane oluqhubekayo. Amabhizinisi, ikakhulukazi amancane naphakathi nendawo, awanayo imali eningi ebekiwe futhi adinga ukusebenzisa aklanywe ngokucophelela isu lohlelo lokuthembeka ukuqinisekisa ukuphazamiseka okuncane. Kuyisenzo esihle sokulinganisa lapho uchwepheshe wakho wobuqotho angasiza ukukuhlanganisa nokukusebenzisa.
Noma ngabe yisiphi isimo sangaphandle, amakhasimende alindele insizakalo ehlukile. Lesi sifo singaba yithuba eliyigolide lebhizinisi lakho lokusebenzisa amasu okuthembeka enoveli agxile kakhulu ekusebenzeni nasekuzweleni kunokuthengisa nje. Uma ungathengisi kubalulekile izimpahla, ungaqhubeka nokugcina amakhasimende ebandakanyeka ngamanye amasu - kufaka phakathi ukunikela ngemidlalo, izibuyekezo zakamuva, ukuhlinzeka ngamathiphu nokunye. Umkhiqizo wakho kufanele uhlale uhlobene, unenani, futhi uqhubeke nokubamba iqhaza. Uma ukwazi, qala ukwamukela ama-oda ocingweni nokudiliva ekhaya.
Lapho ibhizinisi lihamba kancane, ungahle ungafuni ukwandisa amaphuzu wokuvuza. Kepha kulezi zikhathi ezibanjwe yimali, ukwehlisa amanani wokuhlengwa kwamaphoyinti atholakele kungasiza kakhulu amakhasimende akho - futhi ekugcineni ibhizinisi lakho lapho kamuva likhulisa ukwethembeka kwabo kumkhiqizo wakho.
Isazi sakho sobuqotho sizokukhombisa ukuthi ungazisebenzisa kanjani lezi zinhlelo ezahlukahlukene zokwethembeka kumakhasimende. Amakhasimende ayakwazisa ukucabangela.
Abadayisi Nokuthembeka Kwesitolo Sonke
I-COVID-19 ukubuyela emuva okwesikhashana kepha kushiye abathengisi nabathengisi bezitolo bebhajwe enqolobaneni eyeqile, engenayo inzuzo, kanye nemali encane yokuxhasa imisebenzi yabo.
Njengenkampani enakekelayo ungahlela isethi entsha yecebo lokuthembeka ukuze uzuze umusa ngalezi zikhathi ezinzima. Enye indlela ukuhlehlisa ukukhokha noma ukunikela ngendlela yesitolimende. Ungazama futhi ukuthola indlela yokubasiza ukuhambisa uhlu lwabo lokugcina abasebenzisi - mhlawumbe ngokudiliva ekhaya.
Lapho ukukhiya kwehla, ungakulungisa kanjani ukusebenza ukuze uzuze ukwethembeka? Isikhathi sokukhombisa ukuzwelana nokubeka isici somuntu phambili kunoma yiliphi isu. Futhi yisikhathi sokubuka ngakunye nokuxhumana nabathengisi bakho kanye nabathengisi bezitolo. Lesi yisikhathi sokuqinisa ama-bond, ukuthuthukisa imibono emisha ngekusasa, nokuzilungiselela ukusebenza ngokubambisana.
Njengoba nje usiza abathengisi nabathengisi bezitolo, uzofuna ukucatshangelwa okufanayo kusuka yakho abathengisi. Ukwesekwa kwabo kuzoba lusizo olukhulu ukukusiza ukuthi ufeze umfutho ngemuva kokuqeda ukuvala futhi ukuthengisa sekuvilapha. Yakha ukwethembeka futhi ungathola isikweletu kubathengisi bakho, okusiza ukuhamba kwakho kwemali nokusiza ibhizinisi lakho ukubuyela empilweni ngokushesha.
Isakhiwo Sedumela Esibhubhaneni
Yakha isithunzi sakho ngezinsizakalo zenhlalo ezingahambisani nokuthengiswa kwakho. Amabhizinisi angakwazi futhi kufanele eze phambili ukusiza labo abangenawo umsebenzi, bengenamali, bengenandawo yokuhlala, futhi bengenakudla.
Imisebenzi yokusiza abantu izokunika ukubonga kulabo abathintekayo hhayi okunye. Noma kunjalo, kungaba nomthelela omkhulu kudumela lakho lonke. Abathengisi bakho, amakhasimende akho, kanye nabasebenzi, bazokubona ngenye indlela. Futhi ukwethembeka kwabo kuzokhula.
Umhlaba wePost Coronavirus
Ubhadane lungancipha kepha ama-echoes azohlala isikhathi eside futhi amabhizinisi kufanele acabange ngokuvuselela amasu ohlelo lokuthembeka olunezindlela eziningi. Akunakwenzeka ukuthi abathengi namabhizinisi bazoguquka lapho ukuphela kuvalwa ngoba kusenokungaqiniseki ngekusasa lezomnotho lomhlaba.
Vumela isazi sokwethembeka kwamakhasimende sithuthukise amasu amasha azobuyisela abantu emgqeni ongasetshenziswa ngezinketho zokukhokha ezilula, imivuzo esheshayo kanye nezinsizakalo eziningi. Ukukhuthaza amakhasimende ukuthi asebenzise imali kusho ukuthi udinga ukunikeza isikhuthazo nezikhuthazo kubantu abathengisayo - ngethemba lokuthi bazonikeza inani elithe xaxa. Ngokulahleka okunqwabelene kanye nomnotho ovilaphayo kuzoba nzima ukusheshisa ibhizinisi. Kulezi zikhathi, abathengisi, amakhasimende, kanye nabasebenzi bayizimpahla zakho ezinhle kakhulu. Izinhlelo zokuvuselela ubuqotho zingabiza kakhulu namhlanje… kepha zizokhokha izinzuzo ngokuzayo.
Basho njalo yonke into yenzeka ngenxa yesizathu. Uma ubhadane lushintsha indlela esiphila ngayo, indlela esizwana ngayo, nokuthi amabhizinisi asebenza kanjani - lapho-ke singaphila ezweni elingcono. Ibhizinisi lakho kumele lisizakale ngalesi simo futhi lisebenzise izinhlelo zokwethembeka ezilungele ikusasa lethu. Cabanga futhi wenze ngokushesha ngosizo lochwepheshe - futhi ungaqala ikhanda.
Tags: i-covid-19ukwethembeka kwamakhasimendeuchwepheshe wokwethembeka kwamakhasimendeubunzima bezomnothoukugcinwaImali engenayoukwethembeka komthengisi
URakshit ungumthengisi wokuqukethwe kwa UkuthembekaXpert, inkampani yohlelo lokwethembeka eNdiya. Uphethe amakhono amangalisayo ezinhlelweni zokwethembeka, ukumaketha, nokugcinwa kwamakhasimende.